Home > Soomaali > Waxbaridda Dhallaanka Aminka Hure > U Diyaar-garow Xanaanada Caruurta
Figradahan soo-socda waa kuwo kuu sahli doona sidii aad cunugaaga ugu diyaarin lahayd xanaanada caruurta:
Marku jiro 3, wac (612) 348-TOTS (612-348-8687) si aad balan uga samaysatid baaritaanka caruurnimada hore; fiiri boga 6aad.
Maanka ku hay sidaad u qori lahayd ilamahaaga Barnaamijyada Iskuulada Bilowga ah sida, High Five, Head Start, ama Fasalada Waxbarashada Hore Ee Qoysaska iyo Caruurta. Si aad macluumaad dheeraad ah u hesho, wac Xarunta Diiwan Galinta Ardayda.
Sanadka ka horeeya intuusan galin ilmahaagu Xanaanada, ka qayb gal Bandhig Warbixineedka Iskuulada,kaas oo caadiyan la qabto dhamaadka xiliga dayrta ama bilawga xiliga qabawga. Si aad u ogaatid maalmaha la qabto, wac Xarunta Diiwaan Galinta Ardayda.
Booqo doorashooyinka iskuulada ee macquulka ah.
Dooro Iskuulka Xanaanada. Ku dir boostada kaadhka codsiga iskuulka inta ka horaysa wakhigta doorashooyinka iskuulada, caadiyan iskuul doorashada waxaa ugu danbaysa afar ama lix asbuuc ka dib marka la qabto Bandhig Warbixineedka.
U ururi warqadahan mihiimka ah ee soo socda iskuul qorida:
Warqada baadhi-taanka caruurta inta aan iskuul la qorin ka hor.Wac (612) 348-TOTS ama nuqul ka dalbo dhakhtarkaaga.
Warqada talaalada oo dhamays-tiran (fiiri boga 18aad); la xidhiidh dhakhtarkaaga si aad u hesho warqada talaalka.
Marka lugu qoro cunigaaga iskuul, hubi in aad dhamaystirtay habka diwaan-galinta ardayda ee iskuulada.Tani caadiyan waxay dhacdaa xiligan gu’ga.Tani waxay hubaal ka dhigaysaa in cunugaaga uu helo Xanaanada (Kindergarten) iyo bas.